Ndabere eriri ọla kọpa na eriri njikọ njikọ
Induction brazing ụdọ ka a mpempe ọla iji dochie ọwa ọkụ. Usoro ọgbụgba dị ugbu a na-ebute mmerụ oke n'ime ọgbakọ a, ma chọọ nrụzigharị ọrụ mgbe arụ ọrụ bradu rụpụtara.
DW-UHF-10KW OBI AKW BKWỌ M BR. MARA
Ihe ngbanye uzo abuo na-emeghe
• Efere ọla kọpa na mkpanaka ọla kọpa
• waya braze - EZ Flo 45
• alloy braze - 45% ọla ọcha, 1/32 DIA
Ihe igodo igodo - TEST 1
Ike: 7.2 kW
Okpomoku: Odika 1350 ° F (732 Celsius)
Oge: Nkezi oge - 100 sekọnd
Usoro na Nsonaazụ:
Maka brauze brauzed brauzed na mkpanaka ọla kọpa,, EZ Flo 45 bracing bee n'ime 2 ”ogologo ma tinye ya na mpaghara interface. N'ime ọnọdụ mmepụta, a na-atụ aro mkpụrụ osisi EZ Flo 45 brazing. E hibere ọgbakọ ndị a wee kpoo ọkụ ka ọ dịkarịa ala 100 sekọnd iji na-asọpụta alloy ma mepụta ihe nkwado.
Ike: 6 kW
Oge: Oge nkezi - Nkeji 2.5
Maka Induction brazing bra ọla kọpa na ọla kọpa,, EZ Flo 45 braze wedata n'ime 2 ”ogologo ma tinye ya na mpaghara interface. N'ime ọnọdụ mmepụta, a na-atụ aro mkpụrụ osisi EZ Flo 45 brazing. E hibere nzukọ ọgbakọ ndị a (lee foto) wee kpoo ọkụ ka ọ were ihe dị ka nkeji 2.5 ka ọ na-erute alloy wee nweta ihe nkwado.
N'ihi ihe mgbochi nke igwe dị n’etiti ọla kọpa na ọla, ihe mgbochi nke ọla nchara dị ọkacha mma. Na induction kpo oku Ezubere iji mee ka ihe mgbochi ndị ahụ wee banye na efere ahụ na-eme ka ihe ndị ahụ dị n’ọkụ wee na-ebugharị okpomoku ahụ n’elu efere ahụ karịa ka ihe ndị ọzọ na-ebute na-eme ka ogwe ndị ahụ ruo na mbụ tupu okpomọkụ ahụ. Ọ bụrụ na ihe ndị ahụ bụ otu (na - ejikọta ọla kọpa ma ọ bụ ọla kọpa na ọla, nke a abụghị nsogbu. Ọ bụrụ na ihe mgbochi bụ ọla kọpa ma efere ahụ bụ ọla kọpa enweghị nsogbu - naanị mgbe ụlọ mmanya ahụ bụ ọla na efere dị ọla kọpa. Nke a chọrọ. ike a ga - ewelata iji nye ohere maka mbufe ọkụ site na mkpanaka ọla rue efere ọla kọpa.
Oge: Oge nkezi - Nkeji 2
Maka brauzed ọla kọpa ọla na mkpanaka ọla kọpa,, EZ Flo 45 brase brabasị n'ime 2 ”ogologo ma tinye ya na mpaghara interface. N'ime ọnọdụ mmepụta, a na-atụ aro mkpụrụ osisi EZ Flo 45 brazing.
E guzobere mgbakọ ndị ahụ ma kpoo ha ọkụ maka oge nkeji oge 2 iji fee alloy ahụ ma nweta braze ahụ.
ume nkwado Ike nkwonkwo siri ike
Ógbè okpomọkụ na-edozi ahọrọ ma na-edozi, nke na-akpata nrụpụ aka na nkwonkwo na-adịghị ala karịa ịgbado ọkụ
Ọsọ ọsọ kpo oku
Nsonaazụ na-agbanwe agbanwe na ekwesịrị maka mmepụta nnukwu olu, na-enweghị mkpa maka nhazi nhazi
Chebe nchebe karịa ọkụ
Categories Technologies Tags ọla induction brazing igwe, ọla edo induction brazing, eji ọla kọpa, Na-agagharị ọla kọpa na ọla, Bra brads brads na igwe igwe, ọla kọpa na ọla nchara, ọla kọpa brazing, HF na-egwu egwu, usoro ọla kọpa na-emepụta ihe Mail igodo
induction brazing ígwè carbide okpu ka aro